Filtrer les éléments par date : lundi, 06 juin 2022
lundi, 06 juin 2022 19:51
Tranga Covid-19 : Niakatra efa ho avo roa heny tao anatin’ny herinandro
Tsy mitsahatra mitombo ny olona voamarina fa voan'ny Covid-19 tao anatin’ny herinandro, teo anelanelan'ny 28 mey sy 3 jona.
101 ny tranga vaovao, ka tato amin'ny Faritra Analamanga avokoa ny 84 amin'ireo.
Faritra fito hafa no nahitana tranga vaovao, dia DIANA, Vakinankaratra, Atsimo Andrefana, Boeny, Atsinanana, Analanjirofo ary Matsiatra Ambony.
Nisy iray namoy ny ainy.
Manentana ny olona hanao vaksiny ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, miditra anaty vanim-potoana ririnina rahateo ny eto Madagasikara, izay mampahazo vahana ny areti-mifindra.
lundi, 06 juin 2022 17:10
Fiompiana trondro : Ahoana ny fanamboarana filtre
(Somary lava sy teknika kely, vakiana tsikelikely, dia hiverenana raha tsy azo tsara)
Ny trondro dia mila ôksizenina, toy ny olombelona sy ny biby maro.
Ny azy tsy mifoka rivotra ety ivelany, fa ny ôksizenina ao anaty rano no miditra amin'ny sagoaga (esasa na koa trioka, branchie, ilay menamena akaiky ny tendany iny, misokatra sy mihidy mampiditra rano), izay taovam-pisefoana hita amin'ny biby miaina an-drano.
Izy io dia ahafahan'ireo biby ireo maka ny ôksizenina amin'ny rano amoahana diôksida karbônika.
Ny tainy sy ny fahalovan'ireo sakafo tsy laniny anefa dia miteraka nitrite, izay singa mandoto ny rano, ka maha kely ny ôksizenina. Ilaina ny fanoloana matetika ny rano, na ampiana motera ampiodina ny rano anavaozana ny ôksizenina.
Raha maro anefa ny trondro, na kely ny toerana asiana azy, dia mila ampiana filtre ny dobo.
lundi, 06 juin 2022 10:49
Nodimandry ny alahady 05 jona 2022, vokatry ny fandonan'ny fiarakodia azy tany Alterborro Etats-Unis, andron'ny Pentecôte, fetin'ny fidinan'ny Fanahy Masina tamin'ny Apostoly sy i Masina Maria, ny Evekan'i Morondava, efa misotro ronono, Mgr Joseph Donald Leo PELLETIER, raha nivahiny teto an-tany nandritra ny 91 taona.
Teraka ny 17 jiona 1931 izy, nanao voady voalohany ny 02 jolay 1951, namasinina ho Pretra ny 28 oktobra 1956, tonga teto Madagasikara 64 taona lasa izay, ny taona 1958, voatendry ho Eveka ny 17 novambra 1999 ary nohamasinina ho Evekan'i Diosezy Morondava ny 13 febroary 2000.
Ny teny Faneva nentiny dia "Hitia sy Hanompo".
Ny Lamesa fisaorana an'Andriamanitra dia hatao ny Alarobia 08 jiona 2022 amin'ny 09ora maraina ao amin'ny Paroasy Katedraly Marie Manjaka Namahora Morondava, andro fankalazana ny Martiry Md Jacques BERTHIEU, araka ny fangatahany voarakitra amin'ny taratasy napetrany alohan'ny nahafatesany.
Mbola any am-pita moa ny Razana ankehitriny, raha niomana ny fankalazana ny faha 91 taonany ny 17 jona ho avy izao ny Diosezin'i Morondava